Netflix ọkwa na crackdown na Okwey Ọrụ ! - News Ọchịchị
Netflix ọkwa na crackdown na Okwey Ọrụ !
Gụgharia ọrụ ga-egbochi ndị na-eji proxies na Okwey ọrụ ndị dị ka Hola si na-ele ọdịnaya ikikere maka ndị ọzọ na mpaghara
Isiokwu a na-akpọ “Netflix ọkwa crackdown on Okwey ọrụ” e dere site Alex Hern, n'ihi na theguardian.com on Friday 15 January 2016 11.40 UTC
Netflix ka a mara ọkwa atụmatụ ịgbawa ala debanyere aha ndị na-eji ngwá ọrụ ndị dị otú ahụ dị ka proxies ma ọ bụ VPNs na-ekiri video si mba ọzọ.
Ime otú ahụ na-enye ndị ọrụ ohere a ọtụtụ ibu nhọrọ nke utu aha, ma etịbede Netflix si usoro nke ọrụ - nakwa dị ka n'imebi nkwekọrịta Netflix nwere na ọdịnaya na enye.
Na a kwuru, Netflix osote onyeisi oche David Fullagar kwuru: "Ụfọdụ ndị na-eji proxies ma ọ bụ 'unblockers' ka ohere utu aha dị n'èzí n'ókèala ha. Ka adreesị a, anyị jiri otu ma ọ bụ yiri ihe ọtụtụ ndị ọzọ sịrị ime. Nke a technology na-aga n'ihu ka ha webata na anyị na-evolving na ya.
"Nke ahụ pụtara na-abịa izu, ndị na-eji proxies na unblockers ga na-enwe ike ịnweta ọrụ dị ná mba ebe ha na ugbu a bụ. Anyị nwere obi ike mgbanwe a ga-emetụtarịrị òtù-adịghị eji proxies. "
Proxies na VPNs bụ ngwaọrụ nke ụzọ a onye ọrụ internet njikọ site a nke atọ tupu emecha ejikọta ndị internet. Ha na-ejikarị na-ezo ihe na adreesị IP, ma si otú ahụ na ọnọdụ, nke a web onye ọrụ kọmputa.
The ọrụ na-ewu ewu n'etiti Netflix ọrụ, karịsịa ndị na mpụga nke US, n'ihi na ha ekwe ka ohere ka video na Netflix ka ikikere maka mba ndị ọzọ ma ọ bụghị nke ha. Mgbe ụfọdụ,, na-akpali iji nweta media na Netflix adịghị ikikere maka otutu mba n'ihi enweghị ina (dị ka ọmụmaatụ, a Korean émigré ike chọrọ na-ekiri na-egosi site n'ụlọ ha na obodo, nke na e ikikere maka British kiriri ruru ka a enweghị ina); ma ihe ọtụtụ ndị na-, mbanye bụ nnọọ na US version nke Netflix, ekele ya ibu ahịa, nwere a budata mma nhọrọ nke English-asụsụ media karịa ndị ọzọ na mpaghara.
The ojiji nke proxies bụ karịsịa-ewu ewu ná mba ebe ọrụ na-eze ulo oru, dị ka (ruo mgbe na-adịbeghị anya) Australia na New Zealand. Ma akụkụ nke ihe mkpali maka Netflix akpatre cracking ala na nke ha proxies na o yiri ka ya mara ọkwa nke ọnwa na ọ ga-launching n'ụwa nile, ka mba ọ bụla ọzọ karịa China, Syria, North Korea na Crimea.
Fullagar dere na "Anyị na-eme nke ọma n'ọgbakọ na ikikere ọdịnaya gafee ụwa na, dị ka nke ikpeazụ izu, now na-enye ndị Netflix ọrụ na 190 mba, ma anyị nwere ụzọ na-aga n'ihu anyị nwere ike na-enye ndị mmadụ otu fim na TV usoro ebe nile.
"Oge n'aga, anyị na-atụ anya inwe ike ime otú ahụ. Maka ugbu a, nyere akụkọ ihe mere eme omume nke ikikere ọdịnaya site ala n'ókèala, na tiivi nakwa na fim anyị na-enye dị iche, n'ọtụtụ dịgasị iche, site n'ókèala. Ma ugbu a, anyị ga-anọgide na-asọpụrụ ma na ịhụ na e debere ọdịnaya ikikere site ịkwaga ebe ọzọ. "
ikpeazụ January, Netflix bụ amanye ịrụ ụka asịrị na ọ na ulo oru a crackdown na ọrụ nke Okwey ọrụ mgbe akụkọ banyere egbochi ohere. Oge ahụ, ụlọ ọrụ siri na, iji "ụlọ ọrụ ọkọlọtọ ụzọ iji gbochie iwu na-akwadoghị Okwey eji", na ọgụgụ ka ukwuu nke Okwey ọrụ wee na-enwe ike na-ekiri region-ekpochi ọdịnaya na-enweghị mbipụta.
Ma na-amụba nsogbu ọdịnaya na enye, onye naanị nye Netflix ikike ka enuba ụfọdụ ọdịnaya na ụfọdụ ógbè ndị doro anya, nwere ike buru ihe mere na enwere n'ime iwu. Mgbe Netflix ka mbụk uru site ego site na ọrụ ndị na-akwụ iji nweta ekpochi ọdịnaya, ya ugbu a nwere na-egwu mma n'ụwa nile iji rụpụta nnukwu ọbá na ya na narị-plus ọhụrụ mba.
30974	0 Alex Hern, Nkeji edemede, Media, Netflix, News, Technology, Video on ina
← Ndi afọ n'ezie belata gị IQ? Microsoft na-ekwu, ọhụrụ processors ga na-arụ ọrụ na Windows 10 [verge] →